Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): စစ် ဧကရာဇ် နပိုလီယံနှင့် ဗေဒင်ပညာ (အပိုင်း ၃)
စစ် ဧကရာဇ် နပိုလီယံ (အပိုင်း ၃)
မူလ အစက- အပိုင်း ၃-တွင် နပိုလီယန်၏ ဘ၀တစ်သက်တာ ကံကြမ္မာတို့ကို မိုးတားနက္ခတ္တဝေဒ နည်းဖြင့် သုံးသပ်ပုံတို့ကို ရေးသားရန် ရည်ရွယ် ထားသော်လည်း- နပိုလီယန်၏ ဘ၀နှင့် ခံစားရမှုတို့ကို စာဖတ်သူတို့ အနေဖြင့် နားလည်ထားပြီးမှ- နက္ခတ်ပညာဖြင့် သုံးသပ်ပုံကို ဖတ်မိလျှင် ပို၍ အကျိုးရှိနိုင်မည်ကို တွေးမိသဖြင့်- နပိုလီယန်သည် ဘယ်လိုလူမျိုး ဖြစ်သနည်း နှင့် သူဘ၀ နှင့် ခံစားမှု တို့ကို ဦးစွာ ရေးသား ပေးလိုက်ရပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်- ကျွန်တော်တို့သည် သမိုင်း နှင့် ရာဇ၀င်တို့မှ အချက်အလက် တို့ကို လေ့လာခဲ့ကြ ရာတွင်- ခုနှစ် သက္ကရာဇ် အလိုက် မည်သည့် ဘုရင်၊ မည်သည့်နှစ်တွင် နန်းတက်၊ အသတ်ခံရ စသဖြင့် သိခဲ့သော်လည်း- သူတို့၏ ဘ၀တွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသော ခံစားမှု- ပါတ်ဝန်းကျင်တို့မှ ၄င်းတို့အား ပြုပြင်ပေးသွားသော ဘ၀ သင်ခန်းစာ အယူအဆ ဖြစ်ပျက်ပုံတို့ မသိခဲ့ကြသဖြင့်- ထိုသူသည် သူရဲကောင်း၊ ထိုသူသည် လူသတ်သမား၊ ထိုသူသည် သစ္စာဖေါက်ဟူ၍ အလွယ် ယူဆ နားလည် ထားတတ်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
- နပိုလီယံသည် ဧကရာဇ် ဘွဲ.ထူးကို သူ၏ ကိုယ်ပိုင် အားထုတ်မှု ဖြင့် ရယူခဲ့သူဖြစ်သည်။
- သူသည် ရည်ရွယ်ချက်ကိုသာ ဘုရား အဖြစ် ကိုးကွယ်လာခဲ့သူဖြစ်သည်။
- သူ၏ အောင်မြင်မှုသည် အိပ်မက် တစ်ခုပမာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
- သူသည် အဆိုးများစွာကို ဖန်တီးခဲ့သူ ဖြစ်သည်ကို အများစုက သံသယ သိပ်မရှိကြ၊ သို့သော် ကောင်းသော ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ အများစု သိပ်မသိကြ။
- ရည်ရွယ်သည် ဖြစ်စေ၊ မရည်ရွယ်သည် ဖြစ်စေ၊ သူ့ကြောင့်- စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ နှင့် ပြင်သစ်တို့တွင် လွတ်လပ်သော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရသည်။
- ဆင်းရဲသား ပြည်သူတို့ကို ဂုတ်သွေးစုတ် အမြတ်ထုတ်နေကြသော မြေပိုင်ရှင် များ၊ မြို့စား၊ နယ်စား ဆိုသူများကို သူမောင်းထုတ်ခဲ့သည်။
- သူသည် ဆေးရုံများ၊ လမ်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ကြီးများကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။
- ဤသည်မှာ နပိုလီယန် လုပ်ခဲ့သော ကောင်းချက်အချို့ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း- လူအများသေခဲ့ကြရခြင်းသည် သူ့ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရသည်မှာလည်း တစ်ဘက်မှ မှန်နေပါသည်။သူသည်
 ကက်သလစ်ဘာသာဝင် ဖြစ်သည်။ သူသည် ပုပ်ရဟန်းမင်းကို အကျဉ်းချခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
 သူသည် ဆုံးဖြတ်မာကျောသူဖြစ်သည်။ သို့သော် သူသည် ခွင့်လွှတ်တတ်သူလည်း ဖြစ်သည်။
 သူသည် လွန်စွာ ချစ်တတ်သော အသည်းနှလုံးပိုင်ရှင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူသည် အချစ်ကို မယုံတတ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သည်။
အသည်းကွဲ ခဲ့ရ တဲ့ နပိုလီယံ
၁၇၇၉-ခုနှစ် တွင် နပိုလီယန်သည် နောင်တွင် သူ၏ မိဖုရားကြီး ဖြစ်လာမည့် ဂျိုးဇက်ဖင်း ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဂျိုးဇက်ဖင်းသည် ထိုစဉ်က အပျိုစင်တစ်ဦး မဟုတ်တော့ပဲ- ကလေး ၂-ယောက် မိခင် ဖြစ်၍ နပိုလီယန်ထက် ၆-နှစ် ကြီးသည်။ အသုံးအစွဲ လက်ကြီးသူ တစ်ဦးဟု ထင်ရှားသူဖြစ်၏။ နပိုလီယန် နှင့် မတွေ့ခင်က ဂျိုးဇက်ဖင်း ကို အများက “ရို့စ်” ဟုသိထားကြသော်လည်း- နပိုလီယန် ကမူ သူမအား ဂျိုးဇက်ဖင်း ဟု ခေါ်ရန် ပိုနှစ်သက်သည်။ သူမ က ထိုအမည်ကို လက်ခံခဲ့၍ ထိုအချိန်မှ စ၍ သူမ အမည်မှာ ဂျိုးဇက်ဖင်း ဟု တွင်သွားခဲ့သည်။
ထိုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ တွင် နပိုလီယန်မှ ဂျိုးဇက်ဖင်း ထံသို့ ရေးခဲ့သော စာတွင်
“အချစ်ရယ်.. ကိုယ်ဟာ အချစ်ကြောင့် နိုးကြားခဲ့ရပါတယ်။ မနေ့ညက မင်းနဲ့ တွေ.ကြုံခဲ့ရတဲ့ မင်းရဲ. ရုပ်သွင်၊ နဲ. အမှတ်တရ ဖြစ်ရပ်တွေရဲ. ခံစားမှု တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အာရုံ ငါးပါးကို အနားမပေး တော့ပါဘူး.. ”
၁၇၉၆-ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် နပိုလီယန်သည် နောင်တွင် သူ၏ မိဖုရားကြီး ဖြစ်လာမည့် ဂျိုးဇက်ဖင်း ကို ချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ပြီး. ၁၇၉၆-ခုနှစ် မတ်လ ၉-ရက်တွင် သူတို့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
လက်ထပ်ပြီး ၂-ရက်အကြာတွင် နပိုလီယန်သည် ချစ်စ၊ ခင်စ၊ ကြင်နာစ ဇနီးသည်ကို နောက်ချန်ထားခဲ့ရပြီး- အီတလီရှိ ပြင်သစ် တပ်များကို ဦးစီးရန် ထွက်ခွာသွားခဲ့ရသည်။ ခွဲခွာ နေချိန်များတွင် နပိုလီယန်သည် ချစ်ဇနီး ထံသို့ အလွမ်းပြေစာများ အဆက်မပြတ် ရေးသားခဲ့သည်။
၁၇၉၇-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ တွင် ရေးသားခဲ့သော စာ တစ်စောင် တွင်
“သဘာဝ တရားကြီးက ပေးထားခဲ့တဲ့ အချစ်ဝိညာဉ်၊ ချိုမြိန်တဲ့ ရသာ၊ အလှအပ တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးရေ….ကိုယ့်ရဲ. နှလုံးသားကို လှုပ်ရှားနိုင်၊ စိုးမိုး နိုင်သူဟာ မင်းတစ်ယောက်ပါပဲ.. မင်းသာလျှင် .. မင်းပိုင်တဲ့ အင်ပိုင်ယာ ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့် နှလုံးသားကို ဘယ်လို…အုပ်စိုး ရမယ် ဆိုတာ အသိဆုံးရယ်ပါ..”
သို့သော်-- ထိုကာလများ အတွင်းတွင် ပြင်သစ်ပြည် ပဲရစ်မြို့တွင် နောက်ကျန်နေခဲ့သူ ဂျိုးဇက်ဖင်း သည် ရုပ်ရည် ချောမောသော ဒု-ဗိုလ် တစ်ယောက် ဖြစ်သူ ဟစ်ပိုလိုက်တ် ချားလ်စ် (Hippolyte Charles) ဆိုသူနှင့် အိမ်ထောင်ရေး ဖေါက်ပြန်မှု ဇတ်လမ်း ဖြစ်ခဲ့၏။ ထိုသတင်း သည် ၁၇၉၈ -မတ်လ ၁၇-ရက်နေ.တွင် နပိုလီယင် နားသို့ ပြန်ရောက်ခဲ့၍- ဆတ်ဆတ်ခါ နာကျည်း ဒေါသ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း- ဤစကားတို့သည် မလိုသူတို့၏ ချောက်တွန်းသော စကားများသာ ဖြစ်ပါသည် ဟူသော ဂျိုးဇက်ဖင်း ၏ စကားကြောင့် နပိုလီယန်သည် မည်သူ့ ကိုမျှ အပြစ်မယူခဲ့။
ဇနီးသည်၏ တိုးတိုးတိတ်တိတ် အချစ်ဇတ်လမ်းက သည်မှာ မရပ်သွား- ၁၇၉၈ -ဇူလိုင်လ ၁၉-ရက်နေ့ တွင် နပိုလီယင် အနေဖြင့် ထပ်မံကြားသိရပြန်သည်။ ဤတစ်ခါတွင် တော့ နပိုလီယန် အနေဖြင့် ဇနီး နှင့် ကွာရှင်းပြတ်စဲရန်- အကိုဖြစ်သူ ဂျိုးဇက်ကို စီစဉ်စေခဲ့သော်လည်း စစ်ရေး အခြေအနေ ရုတ်တစ်ရက် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်မှု များကြောင့် အကောင်အထည် မပေါ်ခဲ့ပေ။
အသည်း ကွဲခဲ့သော နပိုလီယန်သည် ၁၇၉၈ နောက်ပိုင်းမှ စ၍ သူ့ဘက်က ဖေါက်ပြန်မှုများ ကိုပါ ဆက်လုပ် လာခဲ့သည်။ အချစ်ကို သူမယုံတော့။ လက်အောက်ငယ်သား တို့၏ ဇနီးတို့ အပါအ၀င် အခြား မိန်းမ များစွာနှင့် ဖေါက်ပြန်မှု များ ပြုလာပါတော့သည်။
သို့သော်- မိမိကို အသည်းကွဲအောင် ဖန်တီးခဲ့သော ချစ်ဇနီးနှင့် ဖေါက်ပြန်သူ ချစ်သူတို့အား- ပြင်းထန်သော အပြစ်များ မပေးခဲ့။ (မှတ်ချက်- ထိုစစ်ဗိုလ်လေး ဟစ်ပိုလိုက်တ် ချားလ်စ် (Hippolyte Charles) သည် ၁၈၃၇ - ခုနှစ်၊ နပိုလီယန် သေဆုံးပြီး ၁၆-နှစ်ကြာမှ သေဆုံးခဲ့သည်။)
အချစ်ကို နာကျည်းစွာ ခံစားခဲ့ရသော- နပိုလီယန်သည် အောက်ပါ စကားတို့ကို မကြာခဏ ပြောလာတော့သည်။
“အချစ် ဆိုတာ အကောင်းထက် - အဆိုးကို ပိုဖြစ်စေတယ်။ Love does more harm than good,”
“အချစ်ရေး မှာ အောင်မြင်ဘို့က ဝေးဝေးကို ထွက်ပြေးခြင်းပါပဲ။ The only victory over love is flight”.
သို့သော်- ၁၈၀၄ ခုတွင် သူပြောခဲ့သော စကားတစ်ခွန်း မှာ “အာဏာဟာ ငါ့ရဲ. မယားငယ်ပဲ.. ” ဟုဖြစ်သည်။
အောက်ပါ စာသည်ကား နပိုလီယန် ၁၇၉၅-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ တွင် ရေးသားခဲ့သော စာ တစ်စောင် ဖြစ်သည်။
I wake filled with thoughts of you. Your portrait and the intoxicating evening which we spent yesterday have left my senses in turmoil. Sweet incomparable Josephine, whatastrange effect you have on my heart! Are you angry?
My soul aches with sorrow, and there can be no rest for your lover; but is there still more in store for me
when, yielding to the profound feelings which overwhelm me, I draw from your lips, from your heartalove which consumes me with fire? Ah! it was last night that I fully realized how false an image of you your portrait gives!
အထက်ပါ အချက်တို့သည်ကား- နပိုလီယန် ၏ ဘ၀- ခံစားချက်နှင့် သူ့စရိုက်သဘာဝ အချို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ပိုင်း ဆောင်းပါးများတွင် နပိုလီယန်၏ ကံကြမ္မာနှင့် နက္ခတ္တ အမြင်တို့ကို ဆက်လက်ရေးသားပါမည်။
Mg Lu Aie said...
Dear Sayah Numan,
I just paidashort visit to you as invitedafews day ago.
Mg Lu Aie